အဆိုပါ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အရောင်ကနေဘုတ်၏အရည်အသွေးကိုစစ်ကြောစီရင် - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
အချိန်: 2014-07-06 hits:
ပဌမ, အဆိုပါ PCB အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုအဓိကအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်. အရောင်က၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူး. အရောင်အတွက်ခြားနားချက်လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေပါဘူး. ဘုတ်အဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသောပစ္စည်းအဖြစ်အချက်များကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါအပြင်အဆင်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အလွှာ၏နံပါတ်. သို့သျောလညျး, တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, အနက်ရောင် chromatic ထစ်အငေါ့စေအရှိဆုံးဖွယ်ရှိသည်. တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့စက်ရုံအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအနည်းငယ်သွေဖည်နေတယ်ဆိုရင်, အဆိုပါ PCB circuit board ရဲ့ချွတ်ယွင်းမှုနှုန်းကြောင့် chromatic ထစ်အငေါ့အထိတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်. ဤသည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးပွါးစေ.
ဒုတိယ, တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ကုန်ကြမ်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌အလွန်ဘုံများမှာ. ဒါဟာဖန်ဖိုင်ဘာနဲ့အစေးများဖွဲ့စည်းထားသည်. အဆိုပါနှစ်မျိုးကာကွယ်ပေးနိုင်သောဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခိုင်မာစေရန်ပေါင်းစပ်, ကာကွယ်ပေးနိုင်, မဟုတျဘဲအလွယ်တကူကွေး. ဒါဟာဘုတ်အဖွဲ့အလွှာဖြစ်ပါသည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, ဖန်ဖိုင်ဘာနဲ့အစေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ဦး PCB အလွှာအချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်မပါလျှင်, ကျနော်တို့ကြေးနီတစ်အလွှာနှင့်အတူမျက်နှာပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုလည်း PCB အလွှာတစ်ကြေးနီဝတ်ဆားကစ်ဘုတ်ကိုပဌနာ.
အနက်ရောင်ကို PC ဘုတ်အဖွဲ့ \_ 's circuit ကိုခြေရာတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲပြီးကတည်းက, က R ကိုစဉ်အတွင်းပြုပြင်နှင့်ဒီဘာဂင်၏အခက်အခဲကိုတိုးပွါးစေ&D နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းအဆင့်. ယေဘုယျအားဖြင့်, RD မရှိအမှတ်တံဆိပ်ရှိလျှင် (R ကို&: D) ဒီဇိုင်နာများနှင့်အစွမ်းထက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖွဲ့များ, ကအနက်ရောင်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. PCB ဘုတ်အဖွဲ့. ဒါဟာအနက်ရောင် PCB ဘုတ်အဖွဲ့၏အသုံးပြုမှု RD ဒီဇိုင်းနှင့် Post-ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖွဲ့သည်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ် \_ 's ယုံကြည်မှုကဆိုသည်နိုင်ပါသည်. ဘေးထွက်ထံမှ, ဒါကြောင့်လည်းထုတ်လုပ်သူ \_ 's Self-ယုံကြည်မှုတစ်ခုပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်.
အထက်ပါအကြောင်းပြချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ., ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာအဓိကထုတ်လုပ်သူဂရုတစိုက် PCB ဒီဇိုင်းကိုစဉ်းစားမည်. ထိုကွောငျ့, အတိတ်ကာလဈေးကွက်ထဲမှာတင်ပို့ခဲ့ထုတ်ကုန်အများစုအနီရောင် PCB ပျဉ်ပြားခဲ့ကြ, အစိမ်းရောင် PCB ပျဉ်ပြားသို့မဟုတ်အပြာရောင် PCB ပျဉ်ပြား. သာအလယ်မှာနဲ့ high-end သို့မဟုတ်ထိပ်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်များတွင်အနက်ရောင် PCB ဘုတ်အဖွဲ့မြင်နိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်ဖောက်သည်ငါအနက်ရောင် PCB ဘုတ်အဖွဲ့အစိမ်းရောင် PCB ဘုတ်အဖွဲ့ထက် သာ. ကောင်း၏ထင်မနေသင့်.
Shenzhen WMD Circuits, Ltd. တစ်ဦး pcb ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်. အဓိကထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများမှတဆင့်-အပေါက်ကို double-တဖက်သတ် pcb circuit ကိုပျဉ်ပြားပါဝင်သည်, High-အလွှာပေါင်းစုံအလွှာတိကျစွာဆားကစ်ဘုတ်, မျက်စိကန်းသောသင်ျဂွိုဟျ-ပေါက်ပျဉ်ပြား, High-အကြိမ်ရေပျဉ်ပြား, ထူသောကြေးနီသတ္တုပါးပျဉ်ပြား, နှင့် hybrids တွေကို. ဖျင်, သတ္တုအလွှာ, ရောနှော dielectric ဘုတ်အဖွဲ့, HDI ဘုတ်အဖွဲ့, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆားကစ်ဘုတ်, တင်းကျပ်-Flex ဘုတ်အဖွဲ့, စသည်တို့ကို.
ပြီးခဲ့တဲ့လက multilayer circuit board ရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းပြောနေတာ